Waddamada deeqda bixiya oo Col. Cabdullahi Yusuf ku cadaadiyey in uu Muqdisho u guuro
Buluugleey June 1, 2005
John Koech oo ah Wasiirka Iskaashiga Gobollada Kenya ayaa horey uga dalbaday xildibaanada Soomaaliyeed ee weli sii jooga dalka Kenya in ay si dhaqsa leh uga guuraan dalka Kenya. Xildhibaanadaas isjecleysiiyay sii joogista Nairobi ayaa farriintaas waxay ku noqotay weji gabax, taasna waxay keentay in laba qeybood oo ka tirsan xildhibaanadaas ay u guuraan Muqdisho.
Taas waxay meesha ka saartay qorshihii qarsoonaa ee Col. Cabdullahi Yusuf oo ahayd in xildhibaanada ay joogaan Nairobi inta Itobiya ay ugu gogolxaareyso meel ay dowladiisu saldhigato. Col. Cabdullahi Yusuf waxaa u qorsheysneyd in xildhibaanada uu ku hayo Nairobi si uu u muujiyo in Muqdisho aysan ahayn meel nabad ah iyo isga oo ka wareeganaya in hantida uu ka helo waddamada deeqda bixiya uusan gelin Muqdisho.
Col. Cabdullahi Yusuf waxay waddamada deeqda bixiya ku qasbeen in dowladu u guurto caasimadda Soomaaliya oo ah Muqdisho. Taasina waxay meesha ka saartay xeeladdii Itoobiya ay ku damacsaneyd in Baydhabo oo u dhow xadka Itoobiya ay noqoto xarunta dowlada KMG.
Waddamada daneeya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay muujiyeen walaac ku aadan dagaalada ka soo cusboonaaday dhawaantan magaalda Baydhobo oo ay ku lugleeyihiin dowladda KMG iyo dalka Itoobiya. Dagaalkaas la abaabulay wuxuu halis ku yahay axdigii lagu heshiyey kaasoo loo fadhiyay muddo laba sanadood ah. Bulshada caalamka waxaa u muuqata in ku xadgudubka axdigii xabad joojinta ay sabab u noqon karto in kooxaha Muqdisho ku sugan oo aan la dhacsaneyn siyaasdda Col. Cabdullahi Yusuf ay go’aansadaan in dowladii KMG ay burburto. Si taasi looga badbaadana ay Col. Cabdullahi ku cadaadiyeen inuu la heshiiyo kooxaha ku sugan Muqdisho intii uu ciidamada shisheeye ku lumin lahaa dadaal aan miro dhal lahayn.